DHAGEYSO:Gudiga arimaha gobolka gedo oo warbixin laga dhagaystay. | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Gudiga arimaha gobolka gedo oo warbixin laga dhagaystay.
DHAGEYSO:Gudiga arimaha gobolka gedo oo warbixin laga dhagaystay.
Gudiga dib u heshiisiinta arimaha Gobolka Gedo ee uu Ra’isulwasaaraha kal hore Magacaabay ayaa soo Bandhigay Talo soo Jeedintooda ku saabsan dhamaan Qodobada ay soo uruuriyeen ee Salka u ah doorasho xalaal ah oo ka dhacda Gobolka Gedo gaar ahaan Magaalada Garbahaareey ee Xarunta gobolka Gedo.
Previous articleGalmudug oo faahfaahisay Howlgaladii Mudug
Next articleDHAGEYSO:Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo Warbixin ka dhagaystay Gudiga arimaha gobolka gedo